Exodus 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Wonwiinwii wɔ Horeb sɛ wonnya nsu nnom (1-4)
Nsu fii ɔbotan mu bae (5-7)
Amalekfo bɛtow hyɛɛ wɔn so, nso wodii nkogu (8-16)
17 Israel asafo nyinaa tu fii Sin sare no so.+ Sɛ wotu fi ha a, na wɔkɔ baabi foforo sɛnea Yehowa bɛka sɛ wɔnyɛ no,+ na akyiri yi wɔkɔsoɛɛ Refidim.+ Nanso na nsu nni hɔ a ɔman no bɛnom. 2 Enti ɔman no ne Mose hamee,+ na wɔkae sɛ: “Ma yɛn nsu nnom.” Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na mo ne me reham? Adɛn nti na mokɔ so sɔ Yehowa hwɛ?”+ 3 Ná osukɔm de nkurɔfo no wɔ hɔ, enti ɔman no nwiinwii tiaa Mose sɛ:+ “Adɛn nti na woayi yɛn afi Egypt aba ha sɛ osukɔm mmekunkum yɛne yɛn mma ne yɛn nyɛmmoa?” 4 Ɛnna Mose su frɛɛ Yehowa sɛ: “Dɛn na menyɛ ɔman yi? Aka kakraa bi na wɔasiw me abo!” 5 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Fa poma a wode bɔɔ Asubɔnten Nil mu no kura;+ fa Israel mpanyimfo no bi ka wo ho, na di ɔman no anim kɔ. 6 Hwɛ, megyina w’anim wɔ Horeb botan so. Fa poma no bɔ ɔbotan no, na nsu befi mu aba ama ɔman no anom.”+ Mose yɛɛ saa wɔ Israel mpanyimfo no anim. 7 Na ɔfrɛɛ hɔ Masa*+ ne Meriba,*+ efisɛ ɛhɔ na Israelfo no ne Mose hamee, na ɛhɔ na wɔsɔɔ Yehowa hwɛe.+ Wobisae sɛ: “Yehowa wɔ yɛn mu anaa onni yɛn mu?” 8 Ɛno akyi Amalekfo+ ne Israelfo bɛkoe wɔ Refidim.+ 9 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Yosua+ sɛ: “Paw mmarima ma wɔne Amalekfo nkɔko. Ɔkyena mekura nokware Nyankopɔn no poma no akogyina koko no so.” 10 Na Yosua yɛɛ nea Mose ka kyerɛɛ no no pɛpɛɛpɛ.+ Ɔne Amalekfo no kɔkoe, na Mose ne Aaron ne Hur+ foro kogyinaa koko no so. 11 Sɛ Mose ma ne nsa so kɔ soro a, na Israelfo no redi nkonim, nanso sɛ ogyaa ne nsa mu ba fam a, na Amalekfo no redi nkonim. 12 Bere a Mose nsa gyenee no, Aaron ne Hur faa ɔbo de no tenaa so, na wosusoo ne nsa mu. Ná ɔbaako wɔ benkum na ɔbaako nso wɔ nifa, na ne nsa amma fam kosii sɛ owia kɔtɔe. 13 Enti Yosua de sekan dii Amalek ne ne dɔm so nkonim.+ 14 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kyerɛw eyi wɔ nhoma no mu na ɛnkae mo, na si so dua kyerɛ Yosua sɛ, ‘Mɛpopa Amalekfo, na wɔrenkae wɔn bio da wɔ ɔsoro ase.’”+ 15 Mose sii afɔremuka na ɔtoo din Yehowa-Nisi,* 16 na ɔkae sɛ: “Esiane sɛ wɔama wɔn nsa so atia Yah+ ahengua nti, Yehowa ne Amalek bɛko wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.”+
^ Ɛkyerɛ, “Sɔhwɛ.”
^ Ɛkyerɛ, “Akasakasa.”
^ Ɛkyerɛ, “Yehowa Ne Me Frankaa.”